Wararka - Macaamiisha Ruushku waxay u yimaadaan inay soo booqdaan warshaddeenna
Macaamiisha Ruushku waxay u yimaadaan inay soo booqdaan warshaddeenna
Nofeembar 18, macmiisheena Ruushka ah Hans iyo saaxiibkiis waxay u yimaadeen inay soo booqdaan warshadeena, alaabada iyo adeegyada tayo sare leh, qalabka iyo tikniyoolajiyada, iyo rajada horumarineed ee warshadaha waa sababaha ugu muhiimsan ee loo soo jiidan karo booqashadan.
Iyaga oo wakiil ka ah shirkadda, maamulaha guud Selina iyo maareeyaha ganacsiga shisheeye David oo ay weheliyaan shaqaalaha kale ee waaxda iyo macaamiisha shisheeyaha ah ayaa booqday aqoon-isweydaarsiga wax-soo-saarka, aqoon-isweydaarsiga wax-ka-qabashada, aqoon-isweydaarsiga xawaaladaha, aqoon-is-weydaarsiga, xarunta kormeerka, aqoon-is-weydaarsiga iyo aqoon-is-weydaarsiga baakooyinka, Intii lagu jiray booqashada. , shaqaalaha shirkadayada la socda waxay macaamiisha siinayeen soo bandhigaan wax soo saar faahfaahsan oo kajawaabtay su’aalaha ay soo jeediyeen macaamiisha. Aqoon hodan ah iyo karti ay ku shaqeyso, taas oo aragti qibrad leh uga tagtay macaamiisheena.
Alaabada shirkadda ayaa laga tijaabiyey goobta macaamiisha, talo bixinno iyo talooyin ayaa loo soo gudbiyay ka dib markii aan baaray qaar ka mid ah qaybaha matoorka matoorka iyo qeybaha kale ee mashiinka lagu tuuro. Labada dhinac waxay yeesheen wada hadalo qoto dheer oo ku saabsan iskaashiga mustaqbalka waxayna rajeynayaan in lagu gaaro guul iyo horumar guud oo laga gaaro mashruucyada iskaashiga mustaqbalka. Kadib, labada dhinac waxay yimaadeen xarunta bandhigga alaabada waxayna tijaabinayeen alaabada shirkadda ee macaamiisha